ego Stax | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! ego Stax | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
ego Stax bụ nnọọ n'ụzọ kwụ ọtọ egwuregwu nke bụ ka ụtọ maka Player dị ka ọ dị mfe na-egwu. The gameplay dịkwa nnọọ mfe enweghị ihe ọ bụla-emezu oké atụmatụ na ike ga-enwekwukwa n'ihu site akpali nhọrọ extra feature. The egwuregwu nwere ike na-egwuri na-enwe mmasị na Mkpụrụ cha cha Site.
Banyere Developer nke Cash Stax
A na-eduga kere na Mmepụta na mba lọtrị na ikikere Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ, Scientific Games, ewepụtawo ọtụtụ elu àgwà online cha cha egwuregwu. Nke a egwuregwu a na-mepụtara site na ụlọ ọrụ na dị egwu na Mkpụrụ cha cha Site.
The gameplay nke egwuregwu bụ mara mma na-adịghị mgbagwoju na-agụnye 5 esi anwụde na 10 paylines na mmalite. The egwuregwu na ihuenyo bụ nnọọ mfe ma gameplay na-akawanye na-akpali akpali mgbe esi anwụde amalite atụ ogho. The nso maka nke a Mkpụrụ cha cha Site egwuregwu bụ 0.10 ka 400 Ebe e si nweta kwa atụ ogho. Mgbe nzọ bụ 2 Ebe e si nweta, 20 paylines ibu n'ọrụ n'oge ahụ. The-esi anwụde nwere naanị nnukwu X ịrịba ama, mmanya oyiyi na asaa asaa dị ka ihe ndị bụ isi na akara na nke a Mkpụrụ cha cha Site game.
The ndị ọzọ na atụmatụ nke a Mkpụrụ cha cha Site oghere na-:
Wild- The Joker bụ anụ nnọchianya nke a egwuregwu nke ndị nọ n'ọnọdụ ndị ọzọ nile akara ewepu ọlaedo gburugburu bonus akara ike ọzọ na-emeri Ohere.
Big Bet Games- Nke a bụ nhọrọ mma na nwere ike triggered enweghị usoro site ị. The egwuregwu ise spins na nke a mma nwere 30 paylines na nke i nwere ike na-enweta na payout. Ọ mma gị na-emeri Ohere tremendously. E nwekwara a puru nke rụọ ọrụ Free spins feature n'oge a bonus feature.
Free spins- Ọdịda ọlaedo gburugburu bonus akara ke niile ise-esi anwụde n'otu atụ ogho-akpali nke a mma. E nwere efu ohere mpere on top nke ọ bụla nke na-esi anwụde. Oge ọ bụla ị na adaa a ikposa, efu oghere na n'elu nke ukwu na-enweta otu nọmba nke chụsasịa. The ọnụ ọgụgụ nke chụsasịa i nwere na ndị niile na ohere mpere ga-ekpebi na ọnụ ọgụgụ nke free spins ị ga-esi. Ọ bụla mmezi ikposa oyiyi ọdịda na-esi anwụde mgbe atụmatụ a na-egwuri ga-enye gị ihe mmezi free atụ ogho. A ụfọdụ ọtụtụ chụsasịa nwere ike na-na-na ị na a ugboro ise multiplier.
ego Stax zuru okè nke dị oké njọ egwuregwu bụ ndị na-ala na mfe iwu, ole na ole bonus agba na a mfe gameplay ma ga-achọ a egwuregwu na nwere oké emeri nwere.